Recorder audio: Fampiharana mahasoa handraisana feo sy hanaovana podcast | Avy amin'ny Linux
Recorder audio: Fampiharana mahasoa handraisana feo sy hanaovana podcast
Fikarohana Internet taloha, mitady a Rindrambaiko maimaim-poana sy fampiharana open source hahafahako manoratra feo tsotra hananganana podcast kely hitako a ilaina, kely sy tsotra fangatahana antsoina Audio Recorder.
Azo antoka fa maro no ho afaka hiady hevitra, tsy misy tsara kokoa ho an'ny Linux amin'io faritra io noho ny sahy. Satria ny Audacity dia tsy vitan'ny maimaim-poana sy misokatra ihany, fa manompo ihany koa mirakitra sy manova audios (feo) voarakitra. Ary mety amin'ny fandraketana feo mivantana, fanovana horonam-peo sy kapila, fanovana rakitra fisie, fanovana ny hafainganana na ny feon'ny fandraisam-peo, ary maro hafa. Saingy, nitady zavatra aho tsy dia sarotra sy maivana kokoa, ary manome izany Audio Recorder.
About sahy, sy ireo rindranasa hafa mifandraika amin'ny haino aman-jery multimedia, indrindra amin'ny fanitsiana feo izay tsy hidirantsika lalina, satria noho izany dia mamporisika anao izahay hitsidika sy hamaky ny anay Lahatsoratra mifandraika teo aloha manaraka:
Avadiho ho lasa Multimedia Distro ny GNU / Linux anao
Na izany aza, ny alternatives to Audacity voalaza tao ho an'ny tanjona azo ampiharina:
Recorder audio: Open Source Multimedia App
1 Recorder audio: Open Source Multimedia App
1.1 Inona no atao hoe Audio Recorder?
Inona no atao hoe Audio Recorder?
Amin'ny teny tsotra sy azo ampiharina azontsika faritana Audio Recorder toy ny:
"Fandaharana mahafinaritra amin'ny fandraketana feo (feo) amin'ny solosaina. Ity fitaovana ity dia ahafahan'ny mpampiasa manoratra raki-peo avy amin'ny fitaovana toy ny mikrô, webcam, karatra feo, ary koa avy amin'ny rindranasa toa ny haino aman-jery multimedia na ny mpizaha Internet, sns.".
Audio Recorder amin'izao fotoana izao dia manana tranonkala ofisialy 2 ao LaunchPad. ny voalohany izay misy ny maodely azo tanterahina indrindra, avy amin'ny kinova ho Ubuntu 20.04 (Mifantoka) mandra-pahatonga ho an'ny Ubuntu 15.04 (Vivid). Ary ny faharoa izay misy ireo azo ampiharina azo alaina ho an'ny kinova taloha, izany hoe, avy amin'ny Ubuntu 15.04 (Vivid) ny Ubuntu 10.10 (Maverick).
Ao amin'izy ireo, ny fomba fametrahana dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fanampiana ny PPA fitehirizanaNa izany aza, azo atao izany amin'ny maro GNU / Distros Linux hita ny fonosana ary azo apetraka amin'ny baiko tsotra via manager manager fonosana o ivon-rindrambaiko ho an'ny fametrahana sary.
Amin'ny ahy manokana, satria, mampiasa aho MX Linux 19.2 (manokana respin azo zaraina indray nantsoina FAHAGAGANA) miaraka amin'ny baiko tsotra etsy ambany, afaka nametraka azy tsy nisy fahasarotana lehibe aho:
Araka ny hitanao amin'ny sary eo ambony sy eo ambany, ny Interface ho an'ny mpampiasa sary (GUI) de Audio Recorder ary ny azy Fizarana fanitsiana tsotra sy mahitsy izy io. Na izany aza, eo amin'ireo endri-javatra sy fiasan'ity fampiharana haino aman-jery kely sy tsotra ity dia azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Bara ambony izay misy ny bokotra hanombohana sy hampiatoana ny firaketana ny audio ho zahana miaraka amin'ireo mari-pamantarana ny satany.
Fizarana afovoany miaraka amin'ny Timer azo alamina amin'ny alàlan'ny lahatsoratra hahatratrarana ny vokatra toy ny: Manomboha, mijanona, miato kely ny firaketana amin'ny fotoana iray na aorian'ny fotoana voafaritra.
Fizarana ambany ho an'ny Configuration Audio izay ahafahanao milaza ilay rindranasa izay ho loharano audio (HW / SW) ary iza no endrika endrika itadihana azy.
Bokotra iray ambany Fanamboarana fanampiny izay ahafahantsika miditra masontsivana bebe kokoa amin'ny fitantanana tsara kokoa ny fampiharana. Ary ny safidiny dia azo jerena etsy ambany amin'ny sary ambany avy hatrany.
Araka ny azonao an-tsaina Audio Recorder Tsy natao hampiasa matihanina na mila fanitsiana feo avo lenta toy ny sahy, fa ho an'ny asa tsotra sy miasa toa ny kely podcast ity mety hanampy be izany.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fampiharana multimedia «Audio Recorder», izay tena tsotra sy mahasoa, eo amin'ireo sehatra marobe, izany hoe ny manao tsotra raki-peo amin'ny solosaina rehetra ary manao tsotra aza podcast ity; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Recorder audio: Fampiharana mahasoa handraisana feo sy hanaovana podcast
PowerDNS Recursor 4.4 dia efa navotsotra, fantaro ny vaovaony
Node.js 15.0 tonga miaraka amin'ny fanavaozana ny NPM, V8 ary maro hafa